Kaahin: waa wax laga naxo in shaqaale caafimaad ku hadlaan cunsuriyad intaa gaarsiisan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kaahin Ahmed waxuu ka gilgilshay shaqaalo caafimaad oo hadalo cunsuriyad ah ka baahiyey soomaalida. Qoral uu arrinkan kaga hadlayo ayaa maanta lagu daabacay wargeyska Aftonbladet. sawir: privat
Kaahin: waa wax laga naxo in shaqaale caafimaad ku hadlaan cunsuriyad intaa gaarsiisan
"Waa in lagala noqdo aqoosniga dhartarnimada"
La daabacay måndag 7 mars 2016 kl 15.44
Waxaan ka gilgilshay in ay ummadda soomaaliyeed ku sheegaan dad maskaxda ka cuuryaan ah.
Kaahin Axmed ayaa ka mid ah soomaalida Sweden ee ka gilgilatay hadalo cunsuriyad ah oo shaqaale xarumaha caafimaadka ka howl-gala ku qoreen bogag ay ku sheekeystaan qolyaha cunsuriyiinta.
Wargeyska Aftonbladet ayaa todobaadkan kashifay nin dhaqtar ah oo ku qorey bogga la yiraahdo avpixlat in soomaalida yahiin ”dad caqli liita oo maskaxda cuuryaan ka ah”.
Kaahin Ahmed ayaa qoraal dood ah oo lagu daabacay maanta wargeyska Aftonbladet ku dalbaday in shaqaalahan caafimaadka ee hadaladaan ku hadlay tahay in lagala noqdo aqoonsiga xirfadooda shaqo, maadaame ay jabiyeen oo denbi ka galeen anshaxa u yaala caafimaadka.
- Shaqaalaha caafimaadku waa in uu salim ka yahay waxa loo yaqaan rasism ama cunsuriyad. Waa in qofka caafimaadka ka shaqeeya bini’aadnimada kalo weyntahay midabtakoor, aflagaado iyo faquuq uu ku sameeyo dad gaar ah.
- Shaqaalahan waxay jabiyeen anshaxii iyo sharuucda u yaala caafimaadka. Waxay ku cakeen waxay dhaawac u geysaneysaa wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dhaqaatiirka ka howl-gasha, ayuu yeri Kaahin Ahmed oo qadka telefoonka uu ku wareystay weriye ka tirsan idaacaddan Raadiyaha Sweden.
Kaahin Ahmed waxuu xubin ka yahay xisbiga Moderaterna, una fadhiyaa golaha deeganka Rinkeby-Kista
Dhakhtar: Soomaalidu wey ka caqli liitaan caddaanka
Qoralka Kaahin ee wargeyska Aftonbladet